Iluminaatiga ‘Ilumunati’ - Land Of Punt
Waxaynu qoraalkan ku bartilmamed sanaynaa ururka ugu saamaynta badan ururada hadafka qarsoon ee dunida ka jira waa ururka looyaqaan ‘Illuminati’. Ururo farabdan baa magaca “Iluminati” oo wakhti danbe magaca qaatay lakinse inaku si hoose ayeynu u eegaynaa asalka meesha uu kasoo jeedo magacanu iyo afkaarta ay aminsanyihiin Ilumunatigu. Kalmada “Iluminati” waxay ka timid ‘illuminatus’ waana kalmad lagasoo waariday luuqada “Latin” micno ahaana noqonay ILEYS. Luuqada “Latin” waxaa kasoo farqaday luuqadaha lagaga hadlo wadamad reer galbeedka oo waxaad ku dhex arkay kalmado badan oo af’latiinka ah.
Qarnigii 17aad, yurub waxaa bilaabmay dhaqdhaqaa aan caadin ahayn oo xambaarsan aqoon iyo xoriyad in wax lagu doono. Dhaqadhaqaaqa aqoonta foodsaro ka dhigtay waxaa umidaysnaa aqoonyahano iyo mufakariin kakala socda afkaarta cilmi buuga ku xeeldheer oo hadafkooda koobad ahaa inay ku dagaal galaan aqoonta iyo qalinka. Dhaqdhaqaaqa aan sida dabiiciga ah ku bilaabmin ee aqoonyahan reer yurub ahi hogaaminayeen dagaal waxay kulajireen dhaqanka iyo diin oo talada gacanta ku hayey wakhtiga. Wakhti isku dhow isla qarnigaa 17aad ayaa markaliya waxaa istaadhmay isbadal doon wadamada yurub lagudoonayo inlagu casriyeeyo siiba Jarmalka “Westphalia”. Waxaa laysugu imanjiray shirdoceedyo iyo kulama qarsoon oo ay abaabulkoda lahaayen aqoonyan kasoo kala jeeday jarmalka. Aqoonyahankaa dedaalka ugu jiray inay talada la wareegan waxaa kamid ahaa Adam Weishaupt. Adam W wuxuu ahaa ninka ugu firfircoon ee abaabulka wada wuxuuna macalin ka ahaa jaamacada Ingolstadt magaalada Bavaria.
Adam Weishaupt. Adam W
Tarikhdu markay ahayd 01.05.1776 ayaa golahii aqoonyanku u xilsaareen Adam W. inuu urur dhamaystiran soo sameeyo sidaa ayuuna kusoo sameeyey Ilumunatiga Adam W. Adam W wuxuu kamid ahaa barafoosaradii lajaanqaday qarniga loo bixiyey “Enlightment Age” ee yurub ileyska heshay. Magaca “Ilumunati” waa magac ka turjumaya qarniga falsafada markaa socotay oo ahayd aqoon iyo ileys inlaga hormariyo diinta iyo dhaqanka. Guuxa aqoonta foodsaro lagasoo dhigtay yurub oo dhan ayuu kajiray waxuuna ahaa saldhiga aqoonyanka kacdoonka wadaa ay ku wada kalsoonayeen dooda layska horkeenayo inay udhaxayso wakhti jaahil iyo aqoon casriya magaca “Ilumunati” waxaa sitay dhinaca matala aqoonta casriga magacuna wuxuu ulajaanqadaya wakhtiga siyaasadi taalay.
Adam W. oo loo nisbeeyo inuu ururka “Ilumunati” asaasay ayaa aminsan feker ahaan in siyaasada iyo dhaqaalaha yurub la casriyeeyo oo shicibka talada loo dhiibo. Adam W. waxay isku afkaar yihiin maysooniyada kawada tirsanaayen “Adam Smith” oo ahaa ninka asaasay falsafada dimuqraadiyada “The father of Capitalism” inkastoo taarikhyahanku qaar kamid ah ku doodan ninkaliya inay iskuyihiin labada Adam (magac jarmal & magac ingiriis). Adam-yadu waxay ka turjumayaan feker balaadhan oo taabogalay oo ku salaysan in dunida cidgari maamusho taladeeda meela ugasoo wadajeestan oo dagaal ku furran afkaaraha kale ee lidka ku ah iyagoo ilaalinaya afkaartooda u khaaska ah iyo himiladooda utaal inay gaadhan hadii aany too wadan u haysan oo aanay maamulayn waxay jecelyihiin inay cid udhiibtan siday daaha dabadiisa ka maamulan. Labda Adam hadii ay ninkaliya iskuyiin iyo hadii walaalo yihiinba arinka muhiimka wuxuu yahay inay isku sanad noolayen oo ah sanadkii ILEYSKA iyo inay aminsanayeen afkaarta khaldan ee maysooniyada.
Ururka “Iluminati” wuxuu udhisan yahay sida ururada kale ee dunida kajira madax iyo mijo ayuu leeyahay. Qaab dhismeedka ururka waxaa ugu sareeya gudida fulinta (kuwa ileys helay habeen & maalin iskusida waxu arka) isla gudidaa aya iska dhexdoorata gudoomiye. Gudihoosad (kuwa aan wali ileysku helin lakinse garab salaaxa leh iwm) ayaa ka hoos shaqaysa gudida fulinta waxaan dabaqada ugu hoosaysa laysugu geeyey taagerayasha indho sacraadka loo dhigay ee aminsan inuu ururarkanu ciise soo wado. Waxay leeyihiin xafiisyo iyo astaamo ugaar ah sida fargal astaantodu ku xardhantahay oo ay sitan iskuna gartaan.
hadii ayno soo koobno nimanka la magacbaxay ‘Iluminati’ himilada ay leeyin ma aha mid qof caadiyi fahmi karo waxaynu odhankarnaa waxay la shaqaystaan dunida biniadamka ka qarsoon waxayna la macaamilan jinnka. Waa niman jecel inay dunida maamulan oo kumaa mulaan afkaartoda ugaarka ah. Awooda waxay saaran inay dhalinyarada jaamacada kujira inay ururka kusoo biiran kamid intabadan markaad kamid noqto hedyad yar baa lasocota oo ay kusoo jiidanayaan dhalinyarada xataa inay shaqo kusiiyan oo darajooyin aanad aqoon iyo karti ku qaadhin si fudud laguu dalacsiiyo. Haayada dalka ayeynu odhankarnaa inuu nadaamka shaqosiinta iyo dalacaaduba ka jiraan. Sida ku cada manifestadooda aqoonta ayey raadsadaan iyo dadka saamaynta leh si uu fekerkooda usiinoolado.
Waxay kaloo awooda saaran inay bulshda dad ku dhexsamaystaan oo ka dhaadhiciyaan afkaartoda. Waaxay abuuran ashkhaas bulshada ugu soo dhuunta inay xaqooda udoodan iyo caafimaadka inay kala shaqaynayaan. Waxay sheegtan inay cadaalad utaagan yihiin oo dhiirigaliyan mashaaricna ku bixiyaan iyagoo bartilmaamedsada meelaha ugu jilicsan ee markaa cadaalada ubaahan iyaguna ka muuqan karaan, lakinse cadaalad shuqul kuma leh waa lagusoo gabanayaa. Meelaha ay ugu jecelyihiin inay bulshda kasoo weeraraan waxaa kamid ah aqiidoyinka lahalmaala dumarka (Adam Smith oo ninkii soo jeediyey inay dumarku shaqeeyan gurkastana 2 cashuurod laga qaado) waxayna intabadan ku dhiirigaliyaan waxbarasho iyo sinaan ‘gener-equality’ iyo shaqo. Waxay kaloo bulshada kasoo galaan siiba yurub in waxkasta lays weydiiyo oo aan layska aaminin ama laqaadan waxaan cadayn loohayn iyagoo markaa kusocda uguna soo gabanaya diinta.
Ilumunaatigu mawduucyo lagu baraarujinayo bulshda reer yurub ayey ka dhexbilaaben siiba jarmalka, gobolka Bavaria oo ay dadka ku kicinayaan. Waxay faragaliyeen dawladii markaa ka talinaysay Westphalia “Bavaria” waxayna isku dayeen inay maamulka iyo Kiniisada oo wadashaqayn ka dhaxaysay afganbiyaan. Faragelinta Adam iyo kooxdii la mabaadida ahaydba arinkaa way eeden oo markiiba waa laga horyimi gacan birleh ayaana lagu qabtay.
Xukunkii Bavaria katalinayeey oo uu hogaamiye ka ahaa Charles Theodore gacansaarna lalahaa Kiniisada Katoliga oo iyadu uqaabilsanayn fadwooyin diiniga ah ee lagu ridaynayo nimanka “Ilumunati” ayaa ku guulaystay inay qabqabtaan xubna ugu firfricoon. 1785 ayuu Charles Theodore ku guuleystay inuu gabi ahaanba mamnuuco ururka Iluminatiga wuxuuna wareegto kusoo saraay indhamaan ururada aan dawliga ahayn kana diiwangashanayn xukumada ay maamnuuc yihiin hadii suuqa lagu dhexarko xabsiga loo dhaadhindono.
Iluminaatigii iyo ururadii kale ee ay isku hadafka ahaayen cabsi ayaa kutimid waxayna doorbiden inay isqariyaan lakinse hadafkoodi kamayse hadhin oo si qorsoodi ah bay usii wateen, ajendayaashi ay damacsanaayen inay fuliyaana gurihoosti ayey latageen iyo meelo aan laga warhayn kulamadooda fursadkale ayeey sugeen.
Fursadii ay sugayeen ayaa usoobaxaday. Isla wakhtigaa qarniga 17aad iyo Bavaria dhaqdhaqaaq lamid aha kan laga wada Jarmalka ayaa kasocday fransiiska oo aad loo dhexgalay heer ay noqoday inuu bilaabmo in kooxo laysu abaabulo oo kacdoon toosi ka dhex istaadhmo bulshada. Waxaan mudaharadyo lagala horyimi xukunkii boqortooyada fransiiska kacdoonkasuna wuxuu noqday kacdoonki fransiiska “The French Revolution”.
Kacdoonka fransiiska ka bilaabmay ee lagasoo horjeeday boqortooyada Fransiiska iyo Kiniisada ayaa ufatahay oo saameyey wadamadii kale ee dariska. Iyadoo laga faidaysnaayo kacdoonka fransiisnka ayaa gobolka Bavaria laga bilaabay kacdoon lamid ah “the French revoulution”. Bavaria oo ahayd xarunta ururka ilumunaatiga ayuu kacdoonkii soo gaadh cidkalena may hogaaminayn aan ahayn isla nimankaas oo fursada sugayey. Waxay heleen fursad kale oo siinay inay soo bandhigaan qorshoyaashoda iyo ajendayaasha umeelyaal ee lagu badalayo xunkii hore, wayna ku guuleysteen. Liberty, dimoqraadi, equlity ayaa kamid ahaa kalmadiihii ay ugu khudbadaynayeen shacabka iyo inay horseedidoonan oo cadaalad iyo khayraadka dalkana loo sinaan doono.
Iluminatiyiintu abaabul balddhan oo ilaa iminka socda ayey samayeen sidii wadankasta loogadhsiin lahaa ileyska ay heleen iyo afkaarta ku hoosjira (e.x. dimoqradinimo, dhaqaale casriya & rag iyo dumarka oo siman) iyo inay xarumo magaalo kasta oo bulsho doori ku nooshahay xafiisyo laga furo. Waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dhaqaale xad dhaafa dhaqaalahaso loo siticmaalayo inay iibsadaan hal abuur kasta iyagoo ka duulaya inay ubaahanyiniin dad caqli badan oo hadafkooda faafiya waxna kusoo kardhinkara.
Waxay gacanta ku dhigeen Ilumunatigu waxbarashadii (e.x Skinnerterian criculum) heer dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed inay degsinka waxbarasho iyagu yeeshan. Meelaha afkaartooda sida weyn uqaybiya waxaa kamid ah Hollywood iyo music Industry. Waxay kaloo gacanta ku hayaan jaraaidada iyo tiifiyada wararka dunida uqaybiya uguna caansan; buugagta noocay donanba ha’ahadeen waxay jecelyihiin in afkartooda ay xambaarsanadaan oo dadku iskala sii qabsadaan mustaqbal ay diyaarsaden. Bulshda inay dhinac kastaa kasoo galaan oo saamayn ku yeeshan waa u qorshaysan tahay waana u muhiim, yurub iyo wadamada xidhiidhku ka dhexeeyo way guuleysteen inay saamayn weyn ku yeeshan. Waxay aminsanyihiin in dunida meel kaliya laga xukumo oo nadaam isku mid ah lagu wadashaqeeyo, waxay aminsan yihiin kitaabka “Lucifer” waxayna ka shaqeeyan sidii loohelilaha nadaam iyo xukun meel uwadajeeda, New World Order. Astaanta Iluminaatiga waa il, ishana waxay ka keenen ilaahi Horus ( Aboodi) oo fircooniyiinti hore kala tageen geeska afrika siiba dhulka soomalida.